Warmirtiyeed Madasha Wadatashiga Heerka Sare | UNSOM
22:23 - 26 Feb
Warmirtiyeed Madasha Wadatashiga Heerka Sare
1. Shirkii labaad ee Madasha Wadatashiga Golaha Wasiirada ee Heerka Sare ayaa lagu qabtay Muqdisho inta udhaxaysay 29-30 Luulyo 2015. Waxaana Shirka wada guddoominayay Mudane, Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxwaynaha Dowladda Federaalka Soomaaliyeed iyo Ergayga Gaarka ah ee Xog-hayaha Guud ee Qaramadda Midobay u Qaabilsan Soomaaliya, Nikolas Kay.
2. Wufuud ka koobnayd 32 (hay’adood iyo dowlado) ayaa ku kulmay Shirka si ay dib u eegis ugu sameeyaan wixii horumar ah ee laga gaaray dhinacyada siyaasadda iyo amniga, sidoo kalena ay isugu raacaan arrimaha mudnaanta leh (ee la doonayo in la qabto) muddada ka harsan sannadka 2015, arrintaan oo waafaqsan Qorshaha Hiigsiga Cusub ee Soomaaliya. Wakiillo ka socday Dowlad Goboleedyada Kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed (ISWA) iyo Galmudug ayaa ka soo qaybgalay madasha wadatashiga. Waxaan boogaadinaynaa ka soo qaybqalkan balaaran. (Sidoo kale), waxaan ka dhursugaynaa ka soo qaybgalka dadka muhiimka ah ee ay arrimahan khuseeyaan; waxaa laga xumaaday maqnaanshaha ay (shirkka) ka maqnaadeen maanta qaar kamid ah dadka.
3. Waxaan soo dhoweynaynaa, taageereynaana maamulka cusub ee kumeelgaarka ah ee Galmudug, (sidoo kalena), waxaan soo dhoweynaynaa tallaabooyinka waxtarka leh ee la qaaday (wax ka bedelka dastuurka), si loo xalliyo muranka xuduudda ee maamulku la leeyahay Puntland. Waxaan dhinacyada oo dhan ku guubaabinaynaa inay kusoo biiraan dadaallada lagu horumarinaayo dib-u-heshiisiinta iyo qaran dhisidda. Waxaan ka dhur sugaynaa in si guul leh loogu dhiso dowlad goboleed kumeelgaar ah gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe, isla sannadkaana la go’aamiyo maqaamka ay yeelanayso Caasimadda Muqdisho.
4. Waxaa naga go’an inaan taageerno dhamaan maamulada cusub iyo kuwa dhalan doona si ay u dhistaan hay’adohooda dowliga ah ee ay aadka ugu baahanyihiin.
5. Waxaan soo dhoweynaynaa, bogaadinaynaana xiriirka dhow ee wadashaqayn ee ay yeelan doonaan Dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada mustaqbalka iyo Golaha Wadatashiga Qaranka.
6. Waxaan soo dhowenaynaa dhismaha la dhisay gudiyada ku tilmaaman Dastuurka: sida Gudiga Madaxbanaan ee Doorashooyinka, kan Xuduudaha iyo Federaalka iyo kan Madaxbanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka. Waxaan bogaadinaynaa sida ay Dowladda Federaalka ee Soomaaliyeed uga go’antahay inay wadashaqayn la yeelato Guddiga Baarlamaanka u qaabilsan Hantidhowrka iyo kan Dib-u-eegista Dastuurka (ICRIC) si loo helo habka ugu fiican ee dib-u-eegis loogu samayn karo cutubyada dastuuriga ah ee u baahan in si degdeg ah wax looga qabto. Waxaan waafaqsannahay qorshe hawleedka waqtiyaysan ee uu soo gudbiyay Wasiirka Arrimaha Datuurka waxaana ku baaqaynaa in la dedejiyo ololaha lagu wacyi gelinaayo dadweynaha. Waxaa naga go’an inaan kordhino ka qeybgalka haweenka ay ka qeybgalayaan gudiyadaan, taas oo waafaqsan dastuurka.
7. Waxaan hoosta ka xariiqaynaa muhiimadda ay leedahay dardar gelita ay guddiyadani dardargelinayaan hawshooda, waxaana soo dhoweynaynaa taageerada ilaa iyo hadda la siiyay (Guddiyadan), waxaana ka dhur-sugaynaa inaan isla shaqayno (Guddiyadan) si aan ugu taageerno waajibaadkooda iyo shaqadooda. Waxaan ka dhursugaynaa in si dhakhso leh loo dhiso guddiyada harsan ee dastuuriga ah, gaar ahaan Guddiga Adeegga Garsoorka iyo Maxkamadda Dastuuriga. Waxaan bogaadinaynaa waajibaadka shaqo ee ku tilmaaman Barnaamijka Sharciga iyo Kala Dambaynta (Rule of Law Program), waxaana ku baaqaynaa in si dhakhso leh loo hirgeliyo arrimahaan.
8. Waxaan hoosta ka xariiqaynaa loona baahanyahay in la xaqiijiyo Dib-u-eegista Dastuurka si loo helo dastuur joogto ah oo ay leedahay Soomaliya oo federal ah, midaysanna. Waxaan bogaadinaynaa sida ay uga go’antahay madaxda Soomaaliyeed iyo hay’adaha dastuuriga ah, heer federal iyo heer dowlad goboleedba, hirgelinta ay dalka ka hirgelinayaan nidaam doorasho sanadka 2016. (Sidaas darteed), waxaan ka dhursugaynaa in la soo saaro qorshahaas doorasho oo faahfaahsan isla sannadaan gudihiisa – 2015. Habka doorasho wuxuu ahaan doonaa mid hufan, waxaana loo marayaa wadatashi sal-ballaaran loona wada dhanyahay, ayna isla wada ogolaanayaan dhamaan dadka Soomaaliyeed ee ay arrimuhu khuseeyaan, heer kasta oo ay joogaanba. Waxaanu mar labaad xaqiijinaynaa taageerada ay Bulshada Caalamku u hayso geedi-socodka, kaas oo waafaqsan qaraarka Golaha Amaanka ee trisigiisu yahay 2232.
9. Waxaan ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliyeed, Baarlamaanka Federaalka, Dowlad Goboleedyada, Bulshada Rayidka ah iyo dadka kale ee arrintu khuseysaba inay u wada hawlgalaan si waafaqsan dimoqoraadiyaynta Soomaaliya ayadoo la raacaayo Aragtida 2016.
10.Waxaan ansixinaynaa mabaadi’da dadka hagaysa ee lagu heshiiyay iyo sadexda qodob ee ay ku heshiiyeen Dowladda Federaalka iyo Baarlamaanka Federaalka, arrintaas oo la xiriirta helitaanka is-afgarad heer qaran ah kuna salaysan geedi-socodka doorashada. Waxaan filaynaa in la helo faahfaahinta qorshahaan lagu heshiiyay ee mustaqbalka dhow – waana in uusan ka daba maraynin 15 August 2015. Waxaan ku guubaabynaa dhamaan dadka Soomaaliyeed ee arrimuhu khuseeyaan inay ka faa’iidaystaan fursadda jirta una wada shaqeeyaan si hagar la’aan ah oo lagu heli karo is-afgaradkaan heer qaran ah.
11.Waxaan mar labaad cusboonaysiinaynaa baaqeenii ahaa in dadka Soomaaliyeed u midoobaan hirgelinta Aragtida 2016. Waxaan xaqiijinaynaa in dadka Sooamaliyeed iyo saaxiibada caalamkuba aanay u lahayn dul-qaad kuwa hagal-daacinaayo ama daahinaayo geedi-socodka lagu dhisaayo nabadda iyo qaranimada.
12.Ayadoo la raacaayo ballanqaadyadii la sameeyay sannadi 2014 laguna sameeyay shirki arrimaha amaanka ee ka dhacay London, isla markaasna mar labaad lagu ballan qaaday shirki Madasha Wadatashiga Heerka Sare ee ka dhacday Copenhagen bishi November 2014, waxaan soo dhoweynaynaa, ansixinaynaana qiimaynta, faahfaahinta iyo mudnaanta waqtiyaysan ee lagu hirgelinaayo qorshaha Guulwade. Dadka Soomaaliyeed iyo Bulshada Caalamkuba waxay go’aansadeen inay dhaqaale u abaabulaan hirgelinta qorshahaan.
13.Waxaan garwaaqsannahay baahida loo qabo dhismaha ciidan Soomaaliyeed oo xirfad leh una adeega dadkiisa iyo tan ciidamada booliska si loogu adeego dadka Soomaaliyeed. Waxaan soo dhoweynaynaa qabyo-qoraalka billowga ah ee qorshaha Heegan, waxaana ka dhursugaynaa in lasoo gabagabeeyo (faahfaahinta) qorshahaas ugu dambayn bisha Oktoobar 2015, markaas kadibna waa in si dhakhso leh loo hirgeliyaa.
14.Waxaan bogaadinaynaa qorshaha hadda socda ee laysugu-dhafaayo ciidamada gobolada, sidoo kalena waxaan garwaaqsannahay taageerada ay ka bixiyaan arrimahani Midowga Afrika iyo Urur goboleedka IGAD. Waxaan ku baaqaynaa in qorshahani laga hirgeliyo dhamaan Soomaaliya ayadoo la tixgelinaayo anshaxa iyo xirfadda ciidamada Qaranka Soomaaliyeed. Waana inaan xasuusnaanno muhiimadda ay leedahay sidi (si joogto ah) loogu hayn lahaa ciidamadaas. Waxaan garwaaqsannahay muhiimadda ay leedahay iyo mas’uuliyadda ka saaran Dowladda Soomaaliyeed bixinta mushaaraadka, (sidoo kalena) waa inaan garwaaqsannaa ballanqaadyada ay horay u sameeysay Bulshada Caalamka kuna aadan bixinta lacagaha. (Sidaas darteed), waxaan ku baaqaynaa in si joogto ah oo waqtiyaysan loo bixiyo lacagahaasi. Waxaan garwaaqsannahay baahida loo qabo qeybinta qalabka iyo saadka.
15.Waxaan si adag u cambaaraynaynaa weerarada Al-shabaab, sidoo kalena waxaan soo gudbinaynaa sida aan uga xunnahay dadka ku naf waayay weeraradaasi, waxaana tacsi murugo leh u diraynaa dadki ku waayay (eheladi iyo asaxaabti) ay jeclaayeen.
16.Waxaan bogaadinaynaa, qaddarinaynaana dadaallada ay wadaan Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed iyo AMISOM, dadaalladaas oo ay ugasoo horjeedaan kulana dagaalamaayaan Al-shabaab. Waxaan mar labaad xaqiijinaynaa baahida loo qabo in Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed iyo AMISOM ay si wadajir ah xoogga u saaraan baabi’inta cadowga, taas oo marka u dambaysana ka qayb qaadan doonta jebinta cadowga, waana in la xaqiijiyaa in hawlgalladu ay waafaqsanaadaan Sharciga Caalamiga ah ee Xilliyada Dagaalka iyo kan Xuquuqul Insaankaba, gaar ahaan marka laga hadlaayo dhowrista/badbaadinta dadka rayidka ah. Waxaan ku baaqaynaa, in dhulka laga qabtay Alshabaab laga hirgeliyo xaalad ay ku dheehantahay xasilooni. Waxaana ognahay in qeybaha kala gedisan ee bulshada ay ka qeyb qaadan karaan arrimahaan, sida ururada bulshada iyo ciidamada booliska, ayagoo raacaayo istiraatiijiyada Qorshaha Xasilinta Qaranka.
17.Waxaan ku baaqaynaa in si dhakhso leh loo soo dhamaystiro saan-saabka qorshaha amniga qaranka iyo qorshaha amniga ee muddada dhexeba, lana qeexo dowrka iyo mas’uuliyadaha ay kala leeyihiin hay’adaha amniga qaranka, waana in la xaqiijiyo wadashaqaynta hay’adaha amniga qaranka Soomaaliyeed. Waana in qorshahaan la horkeeno shirkeenna soo socda.
18.Waxaan bogaadinaynaa horumarka laga sameeyay hakinta falalka burcadbadeednimada, ee ka dhacayay xeebaha Soomaaliya, waxaanna hoosta ka xariiqaynaa baahida loo qabo in ciidamada amniga ee badda ay wax ka qabtaan falalka kale ee sharci darrada ah.
19.Waxaan soo dhoweynaynaa qorsheyaasha lagu xoojinaayo maamulka lacageed ee Dowladda Federaalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kan la xiriira arrimaha amniga. (Waxaana qorsheyaashaan kamid ah) samaynta habka daaha furan ee la aamini karo ee mushaar bixinta ciidamada qalabka sida. Waxaan soo dhoweynaynaa dhismaha la dhisay guddi ay ka wada qaybqaadanayaan hay’ado kala gedisan oo wax kaqabta bixinta mushaaraadka iyo gunnooyinka, waxaana ku baaqaynaa in lays waafajiyo (habkaan lacag bixinta ah) si waqtiyaysanna loo bixiyo mushaaraadka iyo gunnooyinka – waana in habkaan la dhamaystiro ugu dambayn bisha Oktoobar 2015.
20.Waxaan bogaadinaynaa Jaan-tuski dhowaan la hirgeliyay ee khuseeyay Maamulidda Xogta Dhaqaale ee Soomaaliyeed, habkaas oo soo bandhigaayo dakhliga/canshuuraha. Sidoo kalena qeexaayo kharashaadka ku baxay hawlaha Dowladda Federaalka Soomaaliyeed.
21.Waxaan bogaadinaynaa dib-u-eegista lagu sameeyay miisaaniyadda qaran ee 2015, dib-u-eegistaas oo billow u noqotay hab is-
 Helista iyo baahinta adeegyada loo baahan yahay ayaa ah muhimadda koowaad ee Soomaaliya
 Saaxiibada caalamka oo ka dhur-sugaya in horumar siyaasadeed oo dheeraada ah lala yimaado kadib mark